ADY AMIN’NY CORONAVIRUS : Hentitra amin’ny fampiharana ireo fepetra efa noraisina ny Fitondram-panjakana
Nandray fepetra hentitra ho fiarovana ny firenena Malagasy manoloana ny fihanaky ny valanaretina covid 19 ny fitondram-panjakana nandritra ny filan-kevitry ny Minisitra farany teo : 19 mars 2020
Nomena alalana manokana ny ao amin’ny Minisiteran’ny toe-karena sy ny fitantanam-bola hividy mivantana any amin’ny mpamokatra azy ireo fitaovana ilaina fa tsy mandalo tolo-barotra atao amin’ny fanjakana intsony izany noho ny hamehana sy ny mahamaika ny fanafarana ireo fitaovana hiarovana sy hisorohana ny fiavian’ny valanaretina. Nampitomboina koa ireo entana efa nohafaran’ny Minisiteran’ny fahasalamana miaraka amin’ny OMS, ka nampitomboina niaraka tamin’izany ny tetibola natokana hisorohana sy hamehezana ity Coronavirus ity.
Tsy maintsy atao fitsirihana koa ireo mpandeha fiaramanidina avy any ivelan’i Madagasikara rehetra tonga teto nanomboka ny alarobia lasa teo ary ny mbola ho avy eto anio. Hisy fandraisana fepetra ara-panjakana eo amin’ny sehatra maro, indrindra amin’ny fampiharana ireo fanapahan-kevitra rehetra noraisina nanomboka tamin’ny fiandohan’ny fiarovana ny tany sy ny firenena.
Misy hotely miisa 17 koa efa nivonona ny hanome ny efitrano fandraisam-bahinin’izy ireo hametrahana ireo olona voatery tsy maintsy hatokana harahi-maso na « mise en quarantaine » ka ny fitondram-panjakana miaraka amin’ny OMS no handray an-tanana izany. Nanome ny toeram-pandraisany etsy Vontovorona ihany koa ny ao amin’ny CNAPS ahafahana mandray ireo olona mila atoka-monina, indrindra ireo avy any amin’ny Faritra ka tsy afaka mamonjy ny toeram-podian’izy ireo raha tsy vita ny 14 andro hitazonana azy ireo.
Tsy azo vangiana ny olona atoka-monina
Tsy azo vangiana, tsy afaka mifanerasera aman’olona ireo olona fehezina anatin’ny toerana voatokana ary maha voasazy ny fandikana izany fanapahana izany. Fantatra fa hisy koa ny fidinan’ny mpitandro filaminana any amin’ny toerana voatondro hijanonan’ireo olona natao fitokana-monina ka hampiharina avy hatrany ny lalàna raha misy ny fandikana ataon’ireo voakasik’izany. Harahi-maso ireo fanafody rehetra entina mitsabo ireo endrika rehetra mety hisehoan’ny soritr’aretina ety ivelany, indrindra ny « paracétamol » mba tsy hisy ny hanitrika izany na hampiakatra ny vidiny.
Efa nidina ifotony nanomboka omaly alarobia 18 marsa teny amin’ny tsenan’Anosibe moa ny avy ao amin’ny Minisiteran’ny indostria sy ny varotra, ka ireo mampiakatra ny vidin’entana dia hosaziana ary horaisin’ny fanjakana avy hatrany ny entana amidy araka ny vidiny tokony ho izy tsy misy fanararaotana ho an’ny mpanjifa.
Tsy tokony hihoatra ny 1800Ariary ny kilaon’ny vary eny an-tsena
Fepetra notapahana ny hoe tsy tokony hihoatra ny 1800 Ariary ny kilaon’ny vary eny amin’ny mpanjifa ary harahi-maso akaiky ny vidin’entana rehetra eny an-tsena, ary horaisina ny fepetra hentitra ho an’ ireo izay manararaotra mampiakatra ny vidin’entana ilaina andavanandro. Harahi-maso tahaka izany ihany koa ny entana any amin’ireo mpamongady sy mpanafatr’entana. Nanao fifanarahana teo anivon’ny Minisiteran’ny varotra ireo toeram-pivarotana lehibe miaraka amin’ny vondron’ny mpandraharaha SIM sy GEM fa hanjifa ny vokatra sy ny vita malagasy ary hitsinjo ny mpanjifa amin’ny fampiharana ny vidin’entana. Harahina manokana ny fivarotana ny vary vokatra eto an-toerana ka hasiana fanaraha-maso akaiky ny fanerena ataon’ireo mpampisambo-bola ny tantsaha mba hialana amin’ny fanararaotana fampiakarana ny voka-bary.
Nanterina hatrany fa mbola ampy mandritra ny enim-bolana ny tahirin-tsakafo ilaina andavanandro eto amintsika ary tsy misy fisakanana ny fanafaran’entana amin’ny alalan’ny sambo na ny fiaramanidina « cargo ». Hatsaraina sy hampitomboina manomboka ny alarobia 18 marsa ny fandraisana ny antso an-tariby eo amin’ny laharana 910, ka hosaziana avy hatrany ireo izay manao vazivazy sy manompa na misompatra ny fampiasana io laharana io. Nanome tanana ny fitondram-panjakana ny avy amin’ny « faculté de médecine » rehetra manerana ny Nosy sy ireo siantifika isan-tsokajiny ary mpianatra mpisabo eo andalam-pahavitan’ny fianarana ary vonona izy ireo ny hanohana amin’ny alalan’ny hevitra sy ny fanomezan-tanana hisorohana ity valan’aretina ity tsy hiditra eto Madagasikara.